Ka shaqaynta Jarmalka - Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha
DGB Ka shaqaynta Jarmalka - Shuruudaha Muhiimka ah iyo Xuquuqda Febraayo 2016
Iskuxidhka Liiska Shaqooyinka - Isku day oo raadso shaqo
Ku shaqeynta ruqsada shaqada
Magangalyo-doonka la aqoonsan yahay (ogolaashaha joogitaanka) ee helay go'aanka aqoonsiga qaxootinimada ee Xafiiska hay´ada qaxootiga Jarmalka wuxuu mabda 'ahaan u shaqayn karaa xaddidaad la'aan.
Marka laga reebo mamnuucista masaafurinta: Haddii uu go´aanka hay´ada qaxootiga yahay mamnuucida masaafurinta, maamulka socdaalka si gaar ah buu ruqsadda shaqada bixiyaa.
Ku shaqaynta Ciqaamada ama Waraaqaha dulqaadka
Dadka haysta ruqsadda degenaanshaha iyo dadka leh xaalad dulqaad leh waxaa la siin karaa ruqsad si ay u shaqeeyaan saddex bilood ka dib. Muddada saddexda bilood ah waxay bilaabmaysaa maalinta diiwaangelinta codsiga magangelyada iyo soo saarista ciqaamada.
Waa inaad ogolaansho inaad ka heshaa xafiiska socdaalka inaad shaqeyn kartid. Oggolaanshaha ruqsada shaqada marwalba wuxuu ku tiirsan yahay awoodda ikhtiyaariga ee xafiiska socdaalka. Waxaa intaa dheer, oggolaanshaha hay'adda shaqaalaynta ee deegaanka ayaa looga baahan yahay. Sharci ahaan, Xafiiska Socdaalka wuxuu codsanayaa oggolaanshada Hay'adda Shaqada, shaqa-raadsadaha maahan inuu raadsado oggolaansho. Afar sano oo deganaanshaha jarmalka kadib ruqsada hay´ada shaqada looma baahna.
Ogolaanshaha shaqada ee hay'adda shaqadu waxay ku saleysan tahay laba shuruudood: baaritaanka suuqa shaqada iyo kala-mudnaanta. Baaritaanka suuqa shaqada waxaa loola jeedaa shuruudaha shaqada ee shaqada markaa cayiman waxayna hubineysaa labadaba dakhliga iyo saacadaha shaqada. Tani waxay xaqiijineysaa shuruudaha suuq-galka suuqa shaqada ee sinaanta dadka haysta ruqsada degenaanshada ama xaalada sharciga dulqaadka iyo dadka aan rukhsada shaqo u baahnayn. Baadhitaanka kala-mudnaanta shaqada waxay caddaynaysaa su'aasha ah in mawqifku uu buuxinaayo shaqooyinka shaqo-doonka ah ee haysta ruqsada aan xadidnayn. Ka dib 15 bilood oo joogitaan Jarmalka ah baaritaanka kala-mudnaanta waa la tirtiri doonaa. Baaritaanka kala- mudnaanta waa laga joojiyay degmadeena.
Shaqooyinka waqtiga ama shaqooyinka kumeelgaarka ah ee shaqaalaha kor ku xusan macquul noqonaysa afar sano kadib markii ay joogaan.
Dakhliga waxaa lagu xisaabiyaa faa'idooyinka loo xisaabiyo sida waafaqsan Xeerka Magangalyo doonka. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa xafiiska sooshalka ee degmada.
Dadka haysta ruqsadda degenaanshada iyo dadka leh xaalad dulqaad leh waxay la xiriiri karaan xafiiska shaqada ee xaafadda si ay shaqo u raadsadaan.
Dadka haysta waraaqaha sharciga dulqaadka oo macluumaad been ah ka bixinaaya aqoonsigooda ama dhalashadooda waa loo diidayaa ruqsada shaqada.
Tababbar xirfadeed oo isdabajoog ah
Jarmalka, waxaa jira hab gaar ah oo lagu barto xirfadaha: Habka labo-geeslaha waxbarashada xirfadaha. Iskuulada xirfadaha waxaa laga bartaa aragti iyo shirkadaha waxaa lagaa bartaa qabshada hawlaha.
Waxbarashada labadaba ee Jarmalka wuxuu ka kooban yahay shaqooyin badan oo farsamo. Sida caadiga ah waxay qaadataa muddo u dhexeeysa laba ilaa saddex sano iyo bar ah taasoo laba weji leh: Toddobaad kasta, mid ama laba maalmood ama ka badan waxaad tagaysaa jiidda dugsi xirfadeed. Halkan, macalimiintu waxay ku barayaan aqoonta aragtida. Maalmaha kale waxaad ku jiri doontaa shirkad, waxaadna adeegsan kartaa aqoontan, tusaale ahaan inaad ku shaqeyso mashiinka. Waxa kale oo aad arki doontaa sida shirkadu ay u shaqeyso, waxa ay sameeyso, iyo inaad qiyaastid inaad halkaas ka shaqeyso.
Jarmalka waxaad heli kartaa mushahar bil walba inta lagu jiro waxbarashada labo-geesoodka ah shirkadda aad u shaqeyso.
Xigasho iyo macluumaad dheeraad ah: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das
Si ka duwan tababarka labadaba, waxaad waqti yar ku qaadataa tababarka noocan ah ee shirkadda. Waxaad baraneysaa aragtida iyo dhaqanka dugsiyada xirfadaha gaarka ah ama kulliyadaha xirfadaha. Tani waxaa lagu dhameeyaa waqti dheer ee shirkadaha ama hay'adaha bulshada, halkaas oo aad ku fulin karto aqoonta dugsiga. Qaabkan tababarka, waxaa qiyaastii yihiin xirfad kalkaaliyaasha, laakiin sidoo kale in beeraha farshaxanka, ganacsi iyo mid farsamo
Caadi ahaan waxbarashada dugsiga waxay socotaa hal illaa saddex sano. Waxaa lagu bixiyaa dugsiyada dawlada iyo kuwa gaarka ah, dugsiyada gaarka loo leeyahay badanaaba lacag baa dugsiga laga bixiyaa. Sida waxbarashada laba-gesoodka ma ahan dugsiga caadiga aha, ma heli doontid mushahar go'an inta aad ku jirto waxbarashada. Laakiin mushahar waad ka helaysaa qaybta caafimaadka ee shaqaaluhu ku shaqeeyaan isbitaalada ama guryaha kalkaalinta mudada dheer ee dhaqanka
Ilaha iyo Macluumadka dheeraadka ah : http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das#schulische-ausbildung
Tababbar isku dhafan oo labadaba ah
Barnaamijka waxbarashada isku dhafan ee labo-geesoodka ah ayaa ah qaab gaar ah oo jaamacadeed. Waxay isku xiraysaa daraasado jaamacadeed iyo machad xirfadeed oo leh tababar ku saabsan hawlaha shirkadaha. Waxbarashada markaad dhammaysid. Waxaad heleysaa laba digrii: hal jaamacad iyo mid ka mid ah shirkadda. Waxbarshada mid jaamacadeed oo u kala baxda mid ganacsi iyo mid farsamo, waxaa lagu soo bandhigaa kulliyadaha dhaqaalaha, injineerniyada ama sayniska kombiyuutarada.
Waxbarashada labo-geesoodka ee isku dhafan ayaa badanaa qaadanaya seddex illaa shan sano. Tababarka xirfadeed inta badan waa la soo gaabiyaa ilaa laba sano, si loo helo waqti ku filan oo lagu dhigto waxbarashada jaamacada. Si aad u heshid qaabkan waxbarasho, waxaad u baahan tahay shahaadada ogolaanshaha Jaamacadaha Jarmalka. Si arrintan loo sameeyo, marka hore waxaad codsaneysaa shirkad ku tababaraysa inta lagu jiro wajiyada waxqabadka ah. Markaas kadib waxaad isku qortaa jaamacada ay shirkadu wada shaqeyn ka dhexeyso.
Ilaha iyo Macluumadka dheeraadka ah: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das#ausbildungsorientiertes-duales-studium
Aqoonsiga gelitaanka ganacsiga (EQ)
Aqoonta hore (EQ) waa albaab fure rajo ah oo loogu talagalay tababarka xirfadeed ama shaqada.
Tababarka hawlgal ee shirkadaha (Equatorial) waa hawl muddo dheer soconaysa, taas oo qaadataa ugu yaraan 6 iyo ugu badnaan 12 bilood. Shirkadda bixinaysa tababarka hawlgal barashadu waa mid loogu tala-galay in loo wareejiyo tababar xirfadeed.
EQ-du waxay u taagan tahay inay saldhig u noqoto hawlaha xirfadda dambe. Astaamahaani waxay ku saleysan yihiin mawduucyada xirfadaha tababarka ee la aqoonsan yahay. Ka qaybgalayaasha EQ waxaa lagu barayaa fasalka koowaad ee tababarka xirfada.
Mushaharka EQ waxaa ku heshiiyaa shirkadda iyo kaqeybgalaha. Guud ahaan, dugsi farsamo ayaa horeyba loo soo booqday, ardayda yar 18 jir, tani waa ka waajib.
Isu-sharaxayaasha jagooyinka waxbarasho xirfadeedka oo aan 30ka sebteembar kadib aan jago waxbarasho helin
kuwa aan lahayn shahaado ay ku helaan jago waxbarasho
naafada waxbarashada dhib ku ah iyo isu-sharaxayaasha itaalka-yar ee bulshada
da´dooda ka weyn 25 jir iyo ardayda haysta shahaadada dugsiga sare waxay taageero u helayaan si dhif ah.
Dhalinyarada ku waajib ah inay iskuulka caadiga ah dhigtaan lama taageeri karo.
Taageerida dhaqaale waxay bilaabanaysaa ugu horayn 1da Oktoobar. Inay kahor bilaabato waa macquul isu-sharaxaha uu yahay „Isu-shraxe hore“ (haddii uu is sharaxay sanada dugsiyeeda hore), naafo waxbarasho haysata ama uu kasoo jeedo bulshada qaybteeda itaalka yar ama wali u gaarin da´da waxbarashada xirfada.
Talacsiinta iyo Masuuliyada:
Hirgelinta laqabsashada EQ waxaa heshiis qoraal ah kukala saxiixan doona ka-qaybqaateyaasha iyo shirkada. Hay´ada warshadaha iyo ganacsiga baari doonta oo diiwaangalin doonta. Waxay ka warhayn doontaa hirgalinta laqabsashada oo ugu dambayntii soo saari doonto shahaado. Haddii ay codsato shirkadu wuxuu helaysaa kaalmo bil walba oo ah € 231 (saafi) oo lagu daray € 116(qeybta guud ee qaaraanka bulshada) oo ka socota Hay'adda Shaqaaleynta, shirkadu waxay € 231 ku bixisaa taageerida qofka dhalinyarada ah - waa la kordhin karaa. 116 euro ayaa loo diraa caymiska hawlgabka. Mushaharka ugu yar ee sharcigu ma khuseeyo ka qaybgalayaasha shahaadooyinka hordhaca ah.
Mabda 'ahaan, qaxootiga waxaa loo oggol yahay inay jaamacadda Jarmalka ka dhigtaan, gaar ahaan haddii la aqoonsaday, laakiin xitaa sidoo kale leh ciqaamad ama dulqaad. Marka la aqbalo iyo marka loo oggolaado waxbarashadda, qaxootiga waxay la simanyihiin codsadeyaasha kale ee caalamiga ah.
Waxaad u baahan tahay inaad hayso warqada ogolaashaha jaamacadda iyo waa inaad taqaanaa luqada Jarmalka heer waxbarashada ku filan. Luqadda wax lagu barto Jaamacadaha Jarmalka inta badan waa Jarmal. Waxaa sidoo kale jira koorsooyin iyo barnaamijyo waxbarasho oo Ingiriis ah, gaar ahaan barnaamijyada mihnadaha. Hadba barnaamijka la rabo waxaa loo baahnaan karaa shahaadooyin dheeraad ah ama dukumintiyada dheeraadka ah in lasoo gudbiyo, sida waraaq dhiirigelin ah.
Macluumaad dheeraad ah oo muhiim ah oo ku saabsan waxbarashada, shuruudaha, fursadaha maalgelinta, bixinnada talabixinta iwm, waxaa laga heli karaa halkan: https://www.study-in.de/de/refugees/ oder www.refugee-students-service.nrw.de
Tababarada iskaa ah
Tababarka iskaa-wax-u-qabsigu waa fursad wanaagsan oo lagu fahmo shirkadaha / ururrada iyo si loo ogaado shuruudaha iyo hawlaha shaqooyinka qaarkood iyo helitaanka waayo-aragnimo xirfadeed oo asaasi ah. Sida caadiga ah, ardaydu waxay jecelyihiin in ay sii xoojiyaan kartidooda ama helitaankooda kartida arjiga shaqo ee shirkad / urur diyaarinta hawlaha mustaqbalka, tababar ama xitaa daraasad.
Si loo dhamaystiro tababar tabaruc ah oo loogu talagalay jiheynta xirfadaha ama dib-u-hagaajinta shaqada, ruqsadda Xafiiska Socdaalka waa in la helaa. Hawlaha tababarka xirfadlaha xirfadeed ee ma ahan mid u dhigma mushaharka ugu yar waxaana laga yaabaa inuu ku dhammaado ugu badnaan 3 bilood.
Tababarka iskaa-wax-u-qabso waxaa kaliya oo la samayn karaa 3 bilood marka Jarmalka lajoogo kadib. Waa in ay u hoggaansamaan sharciyada la xidhiidha, tusaale ahaan waqtiyada shaqada iyo nasashada.
Waa in tababarka iyo booqashada martgalin keliya la kala sooco. Booqashada shirkada waxaa lagu yahay marti oo waa la fiirsanayaa uun. Booqashada shirkadaha si loo fuliyo looma baahna ruqsada hey'adda ajnabiga iyo socdaalka. Aqoonsiga shahaadooyinka xirfadlaha ah ee laga keenay dibaddaha.
Aqoonsiga shahaadooyinka xirfadeed ee laga helo dibadda
Xirfadaha qaarkood ee Jarmalka waa "xakamaysan yihiin". Taa micnaheedu waa xirfadaha qaarkood looma adeegsan karo iyada oo aan la hirgelin habraaca ogolaashaha dawladeed iyo iyada oo aan la aqoonsan shuruudaheeda xirfadeed. Xirfadaha Jarmalka laga xakameeyo waxaa ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka iyo waxbarashada (tusaale ahaan dhakhtar, kalkaalisada ama barayaasha * gudaha) ayaa la xakameynayaa. Intaa waxa dheer, sharciyo gaar ah ayaa lagu dabaqaa xirfadaha qaarkood haddii aad rabto inaad iskaa u shaqeysato (tusaale ahaan, sida furinle * ama timo-jare *).
Faahfaahin dheeraad ah, talobixin telefoon iyo ilo: http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Hintergrundinformationen/hintergrundinformationen-node.html;jsessionid=D173471E9A68633F07F0EA5ADBCE3D61.1_cid368
Waddankaaga ma xirfad baad kasoo baratay ama waxbarasho jaamacadeed?
Aqoonsiga shahaadadani waxay noqon kartaa mid muhiim ah si aad shaqo u hesho Jarmalka. Barnaamijka "Aqoonsiga Jarmalka" wuxuu ka waramayaa mawduucan wuxuuna siinayaa jiheyn. Waxaa loo heli karaa sida download for Android, iOS iyo Windows-Phone.
Talo bixin ku saabsan aqoonsiga shahaadooyinka xirfadeed ee VHS Ennepe-Ruhr Süd
Talada farsamada ee VHS Ennepe-Ruhr-Süd
Waxay bixisaa macluumaad ku saabsan qaab-dhismeedka sharciga iyo ikhtiyaarrada ficilka iyo habka qaabsocodka aqoonsiga
Taageertaa diyaarinta codsashada-arjiga ee xafiiska aqoonsansiga u qaabilsan
waxay la socotaa arjiga codsadayaasha ee dacwadaha.
Inay qiimeeyaan oo sharxaan go´aanada iyo shuruudaha xirfad-qabsashada shaqsiga
waxay kaa caawineysaa inaad heshid wixii tallaabooyin ah oo ku habboon oo loo baahan yahay
wuxuu ku wargelinayaa suurtagalnimada maalgelinta dhaqaale oo loogu talogalay tallaabooyinka sii-dalacitaanka waxbarashada
waxay kugula talinaysaa hagaajinta xaaladda xirfadeed
maaha talo sharci ama meeleyn shaqo
Taladu waa bilaash.
La-talinta waxay socon kartaa ugu badnaan sagaal saacadood, kuwaas oo ku faafaya dhowr ballamo.
Halkan waxaad ka heli doontaa dadka lala xiriirayo iyo lamaanayaasha Ansprechpartnerinnen und -partner.
Macluumaad dheeraad ah waxaa laga heli karaa bogg Macluumaadka Dowladda Federaalka ee Aqoonsiga Shahaadooyinka Shahaadooyinka Shisheeye.
Hay'adda Shaqada ee Federaalka (BA) waxay fulisaa howlaha adeegga guud ee dadweynaha iyo shirkadaha iyo hay'adaha suuqa shaqada iyo tababarka. Shabakadaha guud ee xafiisyada shaqooyinka iyo xafiisyada shaqada ayaa laga heli karaa dalka oo dhan si loo fuliyo hawlaha adeegga.
Hawlaha ugu muhiimsan ee Hay'adda Shaqaalaha ee Fedaraalka ah waa:
Isku xiriirinta tababarka iyo shaqada
latalinta shaqo-bixiyeyaasha tababarka xirfadaha
kobcinta tababarka joogtada ah ee xirfadda
kobcinta sii-wadashada waxbarashadah xirfadeed
kobcinta shaqaaleeysiinta xirfadeed ee dadka curyaamiinta ah
Bixinta lacagta ilaalinta iyo abuurista shaqooyinka iyo magdhowga
sida lacagta shaqo la'aanta ama qaaraanka caymiska.
Intaa waxaa dheer, Hay'adda Shaqaalaynta ee Dawlada Dhexe waxay qabataa suuqa shaqada iyo cilmi-baarista shaqada, kormeerka suuqa shaqada iyo warbixinta, waxayna sii wadaan tirakoobka suuqa shaqada. Intaas waxaa sii dheer, waxay bixisaa - dhaqaale ahaan qoyska - lacagta carruurta. Waxaa sidoo kale loo xilsaaray in ay dalbato hawlo lagula dagaallamo si xun u isticmaalka awoodda.
Xigasho iyo macluumaad dheeraad ah: https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/ArbeitundBeruf/ArbeitsJobsuche/ArbeitinDeutschland/Asylbewerber/index.htm
Talobixin magangalyo doon ah oo ku yaalla degmada Ennepe-Ruhr
Markaad ka sameyso ballan la-talin xafiiska Hay'adda Shaqada, waxaa wanaagsan in aad qaadato CV, kaarkaaga aqoonsiga, shahaadooyinka / shahaadooyinka iyo su'aalaha la buuxiyay.